GarageBand ka emeliterekwa na-agbakwunye ụda na ngwa ọhụụ | Esi m mac
Emegharịala GarageBand na-agbakwunye ụda na akụrụngwa ọhụrụ
Yesnyaahụ bụ n'ehihie nke mmelite na ọ bụ na mgbakwunye na ịmalite mmelite nke usoro Apple, ma iOS, watchOS, tvOS na OS X, emelitere ngwa ndị dịka iTunes ma ọ bụ GarageBand.
Banyere iTunes 12.4, onye ọrụ ibe anyị bụ Jesús Arjona gwara anyị ụnyaahụ ihe etinyere atụmatụ ọhụrụ ahụ ma taa anyị ga-ekwu ntakịrị banyere atụmatụ ọhụrụ nke GarageBand, n'etiti nke anyị nwere ike ịtụ anya na Ejirila ngwa egwu China na ụda ọhụrụ.
Ngwa ahụ Garageband A naghị emelite ya mgbe niile ma mgbe ha mere, ha gụnyere atụmatụ ole na ole. N'okwu a, ọ bụ oge mbata nke ngwa ọrụ ọhụụ yana ọtụtụ ụda metụtara China.
Na a pịa ntọhapụ, Apple na-egosi na mmelite na-agbakwunye ọdịnala ndị China dị ka ọkpọkọ na erhu. Tụkwasị na nke ahụ, agbakwunyewo loops 300 maka kpọmkwem maka egwu ndị China. Ngwa egwu ohuru di maka Mac mbipute na iOS nke GarageBand.
Ihe ọhụrụ ndị a na-akpaghị aka na-arụ ọrụ maka ndị ọrụ na China na GarageBand maka ndị ọrụ Mac na mpụga China. N'ihe banyere iOS, ndị a ozi ọma ha ga-arụ ọrụ site na ndị ọrụ na mpụga China na Ntọala Ntọala di elu. Anyị ga-aga n’ihu nyocha iji hụ ma ndị si na Cupertino tinyegoro akụkọ ndị ọzọ ka ị mara gị. Maka ugbu a, ihe ị ga - eme bụ budata mmelite ahụ ma nwalee akụkọ ndị anyị tụlere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Emegharịala GarageBand na-agbakwunye ụda na akụrụngwa ọhụrụ
Chei ... ugbua na enweghị m keyboard ọ na-emelite ...
Ejighị egwuregwu Superhot belata maka obere oge
Apple sonyeere Worldbọchị Nweta Webntanetị Worldwa